Siny fitaratra China ho an'ny orinasa ronono, siny fitaratra ho an'ny mpamatsy ronono
Varotra sakafo ambongadiny 200ml 260ml 330ml 500ml 1000ml tavoahangy ronono misy sarony metaly
* Tsara kalitao - tavoahangy ronono misy saronyNamboarina avy amin'ny vera avo lenta amin'ny sakafo izay tsy mahatohitra ny hafanana na ny hatsiaka ihany
ny mari-pana, tsy misy firaka ihany koa, ary azo antoka ny sakafo 100%.
* Famolavolana tokana -Ny siny dia manana fisokafana midadasika ho an'ny fidirana mora amin'ny mazava tsara izay ahafahana mijery tsara ny atiny voatahiry ao anatiny, ny endriky ny tavoahangy dia tonga lafatra amin'ny fitahirizana.
* Tanjona maro -Ny siny vera premium dia fomba tsara hitehirizana ny entanao an-dakozia sy an-trano.Tazony ny akora maina toy ny zava-manitra, vovoka, fangaro, kosohy, siramamy, famafazana sy ny maro hafa na ampiasao amin'ny karazana ranon-javatra rehetra ao anatin'izany ny tantely, ranom-boankazo, saosy mafana BBQ, kefir, rano, smoothie, akanjo ronono na zava-pisotro misy rano hafa. .
* Safe ampiasaina-Ny tavoahangy sy ny satroka dia tsy misy poizina, simika ary firaka, ka mahatonga azy ireo ho azo antoka sy mateza ho an'ny fampiasana isan'andro (mipoitra tsara sy haingana).
* Serivisy manokana-Manolotra serivisy namboarina izahay anisan'izany ny habeny, ny loko, ny sarony, ny fanontana, sns.
125ml 130ml 140ml 160ml 190ml Tavoahangin-drivotra Tavoahangin-drivotra Vintage Sakafo maraina mihozongozona Tavoahangy misy ronono madio Tavoahangy fitaratra
Food Grade 135ml 175ml 265ml Yaourt Glass Jar Foana Round Ronono Glass Mason Jar
1) Milk vera mason siny dia vita amin'ny avo kalitao vera, lehibe savaivony vava tavoahangy mora raisina amin'ny endrika tsara tarehy.
3) Ny siny yaourt premium dia fomba tsara hitehirizana ny entanao ao an-dakozia sy ao an-trano.
Tavoahangy Saosy Glass Bbq, tavoahangy ranom-boankazo, tavoahangy vera labiera, siny fitaratra ho an`ny ranom-boankazo, zava-pisotro misy tavoahangy vera, tavoahangy diffuser volotara,